Ihe ederede Muhammad Yasin na Martech Zone |
Edemede site na Muhammad Yasin
Fraịde, Machị 10, 2017 Monday, March 13, 2017 Muhammad Yasin
Kedu mgbe oge ikpeazụ Amazon jụrụ gị onye ị bụ? Ikekwe mgbe mbụ ị debanyere aha gị na akaụntụ Amazon, nri? Afọ ole ka nke ahụ gara? Nke ahụ bụ ihe m chere! Ozugbo ị banyere na akaụntụ Amazon gị (ma ọ bụ gaa na saịtị ha ma ọ bụrụ na ịbanye), ọ na-ekele gị ozugbo n'akụkụ aka nri. Ọ bụghị naanị na Amazon na-ekele gị, mana ọ na-egosi gị ozugbo ihe ndị dị mkpa: atụmatụ ngwaahịa dabere na gị
E nwedịrị oge iduga ndu. N'eziokwu, ọ bụ ọtụtụ azụmaahịa jikwaa nweta azụmahịa. Ndị ahịa gara na ebe nrụọrụ weebụ gị, ha dejupụtara mpempe akwụkwọ na-achọ ozi, ị nakọtara ozi ahụ wee kpọọ ha. Dị Mfe, nri? Ehh… ọ bụghị ka ị chere. Ebumnuche, na nke ya, bụ nzuzu dị mfe. Na tiori, o gha adi nma iwepu otutu ndu. O di nwute, ya
Iji Media mmekọrịta iji bulie gị B2C n'ọkwá
N'agbanyeghị ụlọ ọrụ ị nọ, ọ bụrụ na azụmahịa gị dị na ngalaba B2C, ohere ọ ga-adị mma na ị na-eche asọmpi dị egwu - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa brik na ngwa agha. A sị ka e kwuwe, ị maara ego ole na ole ndị ahịa na-azụ ahịa n'ịntanetị n'oge a. Ndi be anyi ka na-aga brik & ngwa agha; ma mma nke ịzụta n'ịntanetị emeela ka ọnụ ọgụgụ ndị na-elekọta ụlọ ahịa na-adalata. Otu n’ime ụzọ azụmaahịa dị
Tọzdee, Eprel 14, 2016 Tuesday, April 12, 2016 Muhammad Yasin
O doro anya na ịre ahịa dijitalụ bụ anụ ọhịa dị ike - yana otu anụ ọhịa helluva fickle na nke ahụ. Dị ka anyị niile ga-achọ iche na ahịa dijitalụ bụ otu ihe n'agbanyeghị ihe ọ bụla, ọ bụ n'ezie ọ bụghị - na ihe kpatara ya bụ ihe doro anya. Dị ka azụmahịa, ị nwere ike ịhọrọ itinye ụfọdụ pasent nke oge na mmefu ego gị na ụdị ahịa dijitalụ dị iche iche: mgbasa ozi mmekọrịta, PPC, retargeting, ahịa vidiyo, ozi-e